China wafuna sixoshe ukukhathazeka mayelana izifiso zayo e-Antarctica amaminerali-ocebile ngoMsombuluko, nesikhulu ethi Beijing ayinakho izinhlelo ukuqala yezimayini kuleli zwekazi elikhulukazi. Imisebenzi China wanda ezindaweni ezikuma-pole kuyinto ebalulekile njengoba Beijing iphatha emhlanganweni wonyaka we-Antarctic T ... Funda kabanzi »
Argentina ukuba kudlule umthetho izimayini ezintsha kuleli sonto
isikhathi Iposi: May-10-2017
Iziphathimandla Argentina, umkhakha abadlali nezinyunyana kulindeleke ukuba asayine kuleli sonto a eside elindelwe federal izimayini sivumelwano ukuthi ube nobunye imithetho ekhona ezweni lonke, njengoba ingxenye umzamo oqhubekayo gxuma-uqale kwezimali emkhakheni wezolimo. Isizwe, kanye intandokazi zimali izimayini, ha ... Funda kabanzi »
Kuyinto liftoff! indiza China eyakhiwe edingekayo ukuze esibhakabhakeni
isikhathi Iposi: May-05-2017
I eside elindelwe indiza homegrown China C919 Uphakamisa off zendiza lawo lokuqala ngesikhathi Shanghai Pudong International Airport ngoLwesihlanu. 3000 abantu wafakaza sikhathi esingokomlando DEBUT lomthala-injini, owodwa yezinto izindiza sika. Le phrojekthi C919 wethulwa 2006. ababili nina ... Funda kabanzi »
SA izimayini isenzo Ukubuyekeza edonsela izethulo 131 eziphuma kubalimi, abavukuzi namaqembu umkhakha
isikhathi Iposi: May-02-2017
Bomhlaba kanye nezinkampani ukuhlola baphakathi kwamaqembu 131 ukuba bafake isethulo ukuqagulisana icala labo phezu ukubuyekeza samanje izimayini isenzo South Australia. Umkhulumeli Wezimbiwa kanye uNgqongqoshe wezaMandla Tom Koutsantonis wathi "kanye izethulo kucinisekiswe" babeyobe eyomphakathi kepha ... Funda kabanzi »
umthetho Imayini: kakhulu, sekwephuzile
isikhathi Iposi: Apr-27-2017
Lezi zichibiyelo eside baphikisana nezokumbiwa umtsetfo lokhona kuthiwa ziba abasuke bengene shí amaphutha yenqubo kanye ngomzuzu wokugcina anezele ukuthi izovula ukuba inselele eyakhelwe ngaphezu komthethosisekelo. Ngisho noma lo Mthetho amaminerali & Kaphethiloli (MPRDA) Umthethosivivinywa Wokuchibiyela uphasiswa lo ... Funda kabanzi »
Modern Mining and Isonto Technology ukhahlela off e Sudbury
Ngesikhathi lapho embonini yezimayini kungokoqobo ushintsho olwandle ezobuchwepheshe nokusungula izinto, akukaze ezibaluleke kakhudlwana ukubandakanya intsha futhi azifundise mayelana namathuba atholakalayo kulo mkhakha. Lokho kwaba umyalezo wabelane ngo-April 21 ngesikhathi yonyaka ibhizinisi izidlo ukuba ukuqalisa Mode ... Funda kabanzi »
Italian amaphoyisa ukuhamba amabhithi ku-Great Wall
isikhathi Iposi: Apr-25-2017
Eight Chinese amaphoyisa lizoqhubeka patrol e-Italy ngo ekuqaleni kuka June ukusiza nozakwabo Italian ukuvikela izivakashi Chinese, kusho isikhulu esiphezulu samaphoyisa ngoMsombuluko. La maphoyisa, akhethiwe lonke futhi olimini isiNtaliyane, zizohamba izindawo ebabazekayo eRoma, eMilan, e-Florence naseNaples ukuba ... Funda kabanzi »
Gunnedah indoda uwina NSW Imayini Young Achiever Award
isikhathi Iposi: Apr-20-2017
Gunnedah sika Murray O'Keefe is "Usavulelekile" ngemva kokuba abakhethiwe ukwamukela NSW Imayini Young Achiever Award. Ikhansela Gunnedah Shire futhi Whitehaven yamalahle umsebenzi kwamenyezelwa njengoba winner ngesikhathi NSW Imayini Industry and Suppliers 'Awards NSW ePhalamende ekuqaleni kwale nyanga. Omunye amabili ... Funda kabanzi »
Australia greenlights Rio Tinto sika $ 2.45bn ukudayiswa ezimayini zamalahle ukuze Yancoal
isikhathi Iposi: Apr-14-2017
Iziphathimandla zase-Australia onginike Yancoal (ASX: Yal), lo uphiko kwezimboni eChina Yanzhou Coal Mining, ukukhanya green ukuba aqhubekele phambili yalo kuhlelwe $ 2,45 bhiliyoni yokufuna Rio Tinto sika (ASX, LON: Rio) ezishisayo amalahle amafa Hunter Valley. I Foreign Investment Review Board ivume idili, ... Funda kabanzi »
Fiore Exploration ukuqalisa imishini umkhankaso eChile
Fiore Exploration CEO, Tim Warman, wamemezela ukuqala umkhankaso imishini at Pampas El Peñón igolide iphrojekthi inkampani BakaJehova eChile, ehlanganisa komhlaba ezindaweni ezifanayo Geological njengoba Yámana sika Flagship El Peñón okwami. Warman wakhuluma MINING.com ngenyanga edlule ngesikhathi 2017 Prosp ... Funda kabanzi »